विश्व मानचित्रमा नेपाल कसरी चिनिएला ? | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
विश्व मानचित्रमा नेपाल कसरी चिनिएला ?
विश्वमा कहि पनि एकपक्षीय शासन रहेको पाइदैन । बेलायतमा समेत एकपटक राजा विनाको बेलायत रह्यो तर एकता हुन सकेन । मर्यादा पालनको लागि अभिभावकत्व ग्रहण गर्न मात्र राजालाई पुनः ल्याई राज्य दर्शन कै रुपमा स्थापित गरे । अनि मात्र त्यहाँ अनेकता एकतामा बाधियो । धेरै जनाको सोच हुन्छ राजा आफ्नो लागि हुन्छन् भन्ने तर त्यस्तो होइन राजा केवल जनताको लागि भई दिने मात्र हुन् किनभने त्यस्तो सुनको पिजडामा सबै बस्न सक्दैनन् तर नेपालका राजाहरु बसे । जनताको भन्दा बढी दुःख कष्ट सहेर बस्ने गर्थे सबैका सामुछ ।
हामी नेपाली विश्वका जुनसुकै कुनामा गएपनि नेपाल प्रतिको आफ्नो आस्था छोड्न सक्दैनौं । नेपाल देशको उदय गराउने पृथ्वीनारायण शाह र संरक्षण उनका सन्ततिले जनताको सहारा लिएर अवश्य गरेका हुन् । वर्तमानमा पनि नेपालमा धेरै राजनीतिक पार्टीहरु छन् । त्यसमा सबै पार्टी राष्ट्रभक्त हुन् र छन् रहनेछन् भन्न सकिदैन । स्वाभिमान बोकेका केही पार्टीहरु छन् । जनताले उनको ठूलो आस र भरोसा गरेका छन् । हामीले नेपालकै उचो छाता मुनि रहन परोस तर भुटानी शरणार्थीको जस्तो भेदभाव हुने छैन चाहे मधेशी हुन् पहाडी, नेपाल आमाका सबै समान सन्तान हुन् भन्ने जनचेतना फैलाउनु जरुरी छ । देशका हरेक लक्षण हेर्दा खेरी देश खुम्चीदैछ ।
सिङ्गो राष्ट्रले राष्ट्र कै लागि मरिमेटिनु पर्छ र नेपालको स्वाभिमानमा आँच आउन दिनु हुदैन । कसैकसैका डिजाइन हेर्दा कही हामी सिक्किम नजिक पुग्न लागेका त छैइनौं यस्तो कुरा तर्फ चासो राख्न पनि छोड्नु पर्दैन । हामीले कल्पना मात्र गरेका होइनौं कि छिमेकी देश सिक्किम जसमा सबैभन्दा बढी अधिकार नेपालको थियो तर त्यो नेपालको अमिवातुल्य सिक्किम भारतमा विलय गराउन त्यहाँ राजालाई हटाई प्रजातन्त्र नामको शासन ल्याउनमा भारतले जोर ग¥यो । देशमा प्रजातन्त्र आउने भएको प्रजाले नाई भन्छ ? कोही पनि भन्दैनन् । जसरी २००७ साल पूर्व ५÷६ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनमा हामी सहयोग गछौं भनि पं. जवाहर लाल नेहरुले नेपाललाई भन्यो मात्र होइन अंग्रेजहरुले फिर्ता हुने बेला नेपालले के के माग्ने हो भन्ने डरले नेपालमा पनि प्रजातन्त्र ल्याउँछौं भनी योद्धाहरुको खोजविन गरी नेपालमा मिनि गृहयुद्धको सुरु गरायो ।
भारतका नेताहरुले नेपाली नागरिकहरु द्वारा नेपाल माथि हमला गराई आफु खुसी गर्ने इच्छा राख्दै नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउँछौं भनी व्यापक प्रचार प्रसार मात्र होइन राणा सरकार माथि हमला गरिए । प्रजातन्त्रको विरोधमा दिमाग खर्च गरेको नभई विदेशी षडयन्त्रमा नेताहरु आफु पनि फसे जनतालाई पनि फसाए । अनि नेपालले सहजै फिर्ता पाउने भुमि फिर्ता पाउन सकेन । नेपालको भुमिको लागि कसैले पनि आवाज नउठाई आफन्त अर्थात् एकपछि अर्काेलाई सत्तामा पु¥याउन मात्र नेपालमा तमाम मानिस मारिए । अन्तमा २०/२५ हजारको ज्यान लियो गणतन्त्र नामको जादुले ।
देशलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा जीवित राख्न सर्वप्रथम इतिहास, संस्कृति र सभ्यताको अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षण चाहिन्छ । त्यही संरक्षित इतिहासलाई विश्व जगतले पनि विश्वास गर्छन् र नेपालको मान सम्मान गौरव पूर्वको अवस्थालाई नै नियालेर हेर्छ विश्वले । विश्वलाई जुन कुराको विश्वास थियो त्यसलाई हामीले होच्याएरहे¥यौ र नष्ट पा¥यौं भने हामी माथि कसैको पनि विश्वास रहदैन । हिजोको इमानदार नेपाल आज विश्वभरी बदमास ठहरिनेछ । अनि हामी लुप्त हुनेछौं साथै हाम्रो देशपनि । देश माथि विदेशीको दृष्टि र हमलाको तयारी बारेमा बुझ्नु जरुरी छ ।
नेपाल माथि पहिलो हमलाको सुरुवात २००५/००६ साल तर्फ भएर २००७ साल अर्थात् ई.सं. १९५० मा सफलता पायो । सर्वसाधारणलाई यी कुरा थाहा नहुन सक्छ । यी आज सम्मका क्रियाकलपाहरु हेर्दा सिक्किममा प्रथम सुरुवात भएको छ । सिक्किमलाई पचाउन के कति सुविधा असुविधा हुन्छ त्यसबाट भारत सजग रहने हो वा आफ्ना छिमेकी सितको गुरुयोजा अगाडी बढाउने हो भन्न कठीन भएपनि सिलान्यास भइसकेको छ । त्यसबाट नेपाल कसरी बच्छ हेर्न बाँकी छ कि नेपालीहरुको एकताको ताकत तौल्न बाँकी रहेको छ ।
← प्रदेश नं. ७ को चुनाबी परिणाम